🥇 ▷ Warar aan ku arki karno dhacdada guga ee Apple ✅
Warar aan ku arki karno dhacdada guga ee Apple
Waxaan soo koobeynaa wararka suurta galka ah ee Apple ku soo bandhigi doonto munaasabadda guga
Maalinta ku xigta Maarso 9 Apple waxay qaban doontaa munaasabaddeeda cusub ee guga, Dhacdadan ayaa inta badan diiradda saari doonta saacadda dheer ee la sugayay ee smart of shirkadda Californian, the Apple WatchHostay waxaa sidoo kale la filayaa in Apple ay u hibeyso dhacdadan si ay u soo bandhigto waxyaabaha kale ee la yaabka leh. In kasta oo aan sugno maalinta dhacdada, hoos waxaan ku arki doonaa soo koobid ku saabsan waxyaabaha dhici kara ee imaan kara inta lagu gudajiro dhacdadaas.
In kasta oo isaga Apple Watch Waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay bishii Sebtember ee la soo dhaafay ku xigta iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus. In kasta oo tan iyo waqtigaas ilaa iyo markaas, wali waxaan haynaa macluumaad yar oo rasmi ah oo ku saabsan saacadda smart ee Apple. Ilaa hadda muuqaalka iyo astaamaha qaarkood waa la yaqaan, laakiin wax yar uun.
Inta lagu guda jiro dhacdada soo socota ee Apple, oo dhici doonta 9-ka Maarso, wiilasha shirkadda Kalifoorniya waa inay soo bandhigaan macluumaadka qaar, sida:
Taariikhda lagu sii daynayo: Qalabka waa inuu yimaadaa horraantii Abriil Mareykanka, in kasta oo sidoo kale la rajeynayo in taariikhaha helitaanka Yurub la siin doono.
Qiimaha: Apple Watch Waxay ku imaan doontaa dhowr nooc, oo leh noocyo kala geddisan oo miiqyo iyo jirro ah. Waqtigan xaadirka ah qofna ma oga qiimaha rasmiga ah ee moodeelada oo dhan, kaliya qiimaha moodalka salka ayaa la ogyahay, kaasoo bilaabi doona $ 349.
Codsiyada: inta lagu gudajiro dhacdadan Apple Waa inay sidoo kale muujisaa codsiyada qeybta saddexaad ee la heli doono, tan iyo markii la bilaabay saacadda, gudaha App Store ee loo hibeeyay Apple Watch.
Iibkaaga: sida ay tilmaameen ilo ku dhow shirkadda, Apple wuxuu isu diyaarin lahaa inuu abuuro goobo u go’an iibinta saacadaha smart ee gudaha dukaamada Apple Store.
Shaqooyinkeeda: waa wax macquul ah in Apple aadan ka hadlin dhamaan howlaha aaladda inta lagu gudajiray soo bandhigidaada waxayna ka faaiideysan doontaa Maarso 9 si aad u siiso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Apple Watch.
Suumanka: inkasta oo aysan jirin wax caymis ah, waxay aad ugu egtahay in Apple ay iibiso xargaha saacadahaaga si gooni gooni ah, hase yeeshe ma ogaan kartid qiimaheeda ama goorta.
Bateriga: Marka loo eego waxa Tim Cook soo wariyey, Apple Watch Waa in dacwad la soo oogtaa habeen kasta, si kastaba ha noqotee shirkadda ayaa si adag uga shaqaysay hagaajinta batteriga aaladda.
Is dhexgalkaaga iPhone-ka: inta lagu jiro dhacdadan Apple Waa inay bixisaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan suurtagalnimada is dhexgalka u dhexeeya Apple Watch iyo iPhone.
Apple PayHealtkKit Siri: Apple Watch Waxay la jaan qaadi doontaa dhammaan adeegyadan, inkasta oo xilligan aan la ogeyn sida ay ku dhici doonto.
Marka lagu daro imaatinka Apple, waxaa suurtagal ah in shirkadda Californian soo bandhigto sheeko kale, oo ka mid ah imaatinka nooc cusub oo Apple TV ah, runti, waxay u badan tahay in qalabkan cusub uu ku qalabeysan yahay is dhexgalka si ka wanaagsan oo horumarsan oo ay la socdaan aaladda iOS, marka lagu daro sugitaankaaga inaad haysatid suurtogalnimada rakibidda codsiyada dhinac saddexaad ah.
In muddo ah qaybtaan waxay ka hadlaysaa shaqada suurta galka ah ee aad qabaneyso Apple si aad u horumariso wararka xanta ah ee 12-inch iPad Pro lagu magacaabi karo iPad Air Plus, oo u imaan kara inuu bedelo MacBook Air, ugu yaraan adeegsadayaasha aan haysan baahiyo gaar ah iyo kuwa ku kobcin kara kiniini. In kasta oo ay aad u adag tahay in qalabkan la soo bandhigo Maarso 9, waxaa jira waxyaabo badan oo laga filan karo.
Aaladaha kale ee ay isticmaalayaashu aadka u filaayaan ayaa ah 12-inji MacBook Air Retina. Dhacdadani waxay u badan tahay in lagu go’aamiyo inay na tusiso kumbuyuutarkan cusub ee ka socda shirkadda Californian, kahor iPad Pro, maadaama wararka xanta ah ee ugu dambeeyay ay ka hadlayaan bilaabida Mac-da cusub xilliga gu’ga soo socda.
Codsiyada sawirrada ee Mac
Intii lagu gudajiray dhacdadan Apple waxay sameyn kartaa soosaarida rasmiga ah ee cusboonaysiinta cusub ee OS X, nidaamka hawlgalka ee kumbuyuutarrada Mac, kaas oo iskudhafan kara Codsiga cusub ee Sawirrada ama Sawirrada. Xusuusnow barnaamijkan ayaa u imanaya inuu beddelo codsiyada iPhoto iyo Aperture.
Dabcan, ma noqon doonto ilaa Maarso 9keeda soo socota markaasoo aan baran doonno dhammaan news Apple waxay soo bandhigi doontaa munaasabaddeeda guga.